Ha choputara ohuru ohuru na mbara igwe na Solar System | Akụkọ akụrụngwa
Otu ìgwè nke ndị na-enyocha mbara igwe nke ndị si mba dị iche iche achọpụtala mbara igwe ọhụụ ọhụrụ na mbara igwe. Planetwa ọhụrụ a, baptizim maka oge a na aha ya 2015RR245 Dabere na International Astronomical Union, ọ dị ka ọnụọgụ nke na-erughị nke mbara ala mana karịa nke satịlaịtị, ọ ga-anọ na orbit nke dịdebere Neptune.
Banyere nkọwa nke mbara ala ọhụụ ọhụrụ a, dị ka ndị na-achọpụta ya si kwuo, anyị ga-ekwu maka ụfọdụ 700 kilomita na dayameta nke, ma e jiri ya tụnyere dayameta nke ụwa, dị ihe dị ka okpukpu iri na asatọ. Banyere orbit ya, ọ dị ihe Ugboro abuo site n’anyanwụ karịa ụwa. Ọ bụ ezie na ụdị ihe a dị na mbara igwe bụ ihe a na-ahụkarị, ọkachasị na eriri Kuiper, nke bụ eziokwu bụ na nke a dọtara mmasị dị ukwuu n'aka ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị n'ihi nha ya na obosara ya.
2015 RR245 na-ewe afọ 700 iji mee mgbanwe zuru oke nke Sun
Dika akwukwo edeputara na nchoputa, anyi na ekwu okwu banyere mbara uwa nke na Ọ ga-ewe ihe dị ka narị afọ asaa iji gbaa anyanwụ gburugburu. N’afọ 2096, ọ ga-anọ ebe kacha nso n’ụwa. N'ihi nkewa nkewa n'etiti ụwa na ụwa ọhụrụ a, ndị sayensị enwebeghị ike iji nghọta zuru oke mụọ mmegharị 2015 RR245.
Dị ka Michele bannister, ndị nchọpụta si Mahadum Victoria dị na Canada:
A kọwara ụwa ndị nwere oke mmiri karịa Neptune dị ka nnukwu mbara ala ndị etolitere ma mechaa pụọ ​​na Sun. Agbanyeghị, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụwa ndị a niile nwere oke pere mpe ma daa mbà - ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịchọta otu nke buru ibu ma na-enwu gbaa iji mụọ nke ọma. .
Ha bụ ihe kacha dị nso na capsule oge nke na-ebuga anyị na ọmụmụ nke Mbara Igwe. Enwere ike iji ihe atụ mee ihe atụ, nke na-agwa anyị gbasara ihe ndị e kere eke gafere.
Ozi ndi ozo: Sayensị
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Ha choputara ohuru ohuru na mbara igwe
N'ihe atụ dị n'akụkụ akụkọ, olee mbara ala nke dị n'etiti Mars na Jupita?
Nintendo Classic Mini agaghị enweta egwuregwu ọ bụla ma ọ bụ njikọ internetntanetị